RA’IISAL WASAARAHA ISRAEL BENJAMIN NETANYAHU OO BOOQANAYA UGANDA |
RA’IISAL WASAARAHA ISRAEL BENJAMIN NETANYAHU OO BOOQANAYA UGANDA
Ra’iisal wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa booqanaya Uganda isagoo soo arki doona meel ku taala Entebbe oo dad lagu afduubay 1976 oo walaalkiis oo hogaaminayay ciidamada gaarka ee Israel uu ku dhintay.
Ciidamada gaarka ee Israel ayaa badbaadiyay in ka badan 100 qof oo la afduubay oo toddobaad lagu hayay terminaalka garoonka diyaaradaha ee Entebbe, howlgal aad u adkaa. Waxay Israel ku soo noqdeen 4 July 1976.
Mr Netanyahu ayaa sidoo kale booqanaya Kenya, Ethiopia iyo Rwanda.
Hogaamiyaha Israel ayaa sheegay in booqashada ay ka mid atahay qorshe Israel ay ku doonayso inay si wayn Afrika ugu soo noqoto.
Mr Netanyahu, ayaa noqon doona ra’iisalwasaarihii ugu horeeyay ee Israel ee booqda waddamada Afrika ee saxaraha ka hooseeyay tan iyo 1987-dii markii uu ra’iisalwasaare ahaa Yitzhak Shamir.
Natanyahu walaalki, Jonathan, ayaa lagu toogtay isagoo hogaaminaya ciidamada gaarka ah ee Israel ee howlgalka lagu soo daynayo dadka fulinaya. Dadka ayaa waxaa afduubay mintidiin Falastiiniyiin iyo Jarmal ah iyagoo la socda diyaarad Air France.
Afar dadka la afduubay, toddobo kuwa wax afduubay iyo 20 ciidamada Ugandaoo ilaalinayay terminaalkii hore ee garoonka ayaa ku dhintay.
Ku dhawaad dadka la soo daayay ayaa ahaa reer Israel iyo dad Yuhuud ah, oo laga soocay rakaabkii kale ee diyaarada saarnaa.
Kabtankii diyaarada Air France iyo 12 shaqaalihii diyaarada ayaa sidoo kale la badbaadiyay.
Dadka aan Yuhuuda ahayn ayay sii daayeen dadkii wax afduubay toddobaadka horaantiisii. Mr Netanyahu ayaa howlgalka ku tilmaamay, mid waddanka saamayn wayn ku yeeshay waddanka iyo shaqsiyan reerkiisa.
Booqashada Netanyahu uu ku marayo Uganda, Kenya ,Ethiopia and Rwanda ayaa loogu tala galay inay noqoto ku soo noqoshada Afrika, oo ah gobol qayb wayn kaga jira caalamka.
Xiriirka Israel ee Afrika ayaa xooganaa 1960-yadii, laakiinhoos u dhacay ka dib cadaadis waddamada carabta ee shidaalka leh.
Xiriirkii Israel ay la laheed dawladii midab kala sooca ee Koonfur Afrika sidoo kale ma uusan caawin.
laakiin, hadda waxaa jira faa’iido labada dhinac, iyadoo waddamada Afrikaanka ay doonayaan inay hormariyaan dhaqaalahooda, iyo xiriirka dhinaca ammaanka ee Israel iyo Israel oo doonaysa inay samaysato saaxiibo cusub ayna hormariso xiriirka gobolka oo mintidiin islaamiyiin ah ay ku kordhayaan.
Israel ayaa bilawday $13 milyan oo barnaamij gargaar ah oo lagu adkaynayo xiriirka waddamada Afrika, oo ay ka mid yihiin tababaro dhinaca ammaanka iyo cafimaadka.
Waxay rajaynee kordhinta wadashaqaynta inay kordhiso taageero waddamada Afrikaanka ee ka mid ah Qaramada Midoobay iyo hayadaha caalamiga ee kale, halkaasoo Israel lagu cambaareeyo dhulka ay ka haysato Falastiiniyiinta, iyo xayiraada ay ku hayso Qasa.
Laakiin, afhayeenka dowladda Falastiiniyiinta Jamal Dajani, ayaa sheegay inuu aaminan yahay in Israel xi awooda Afrika ay doonayso inay ku yeelato aysan ku guulaysaneen.
Waddamada Afrika ayaa arki doona “dacaayada” Netanyahu, sababtoo ah Afrikaanka iyo Falastiiniyiinta ayaa wadaaga taariikh “gumaysi iyo dhulkooda oo la haysto” ayuu u sheegay wakaalada wararka ee AP.